Akụkọ - Ọdịiche dị n'etiti ebu ihe atụ na mmepụta ihe
Ihe dị iche n'etiti ebu ihe atụ silicone na ebu ebu
Theghọta ọdịiche dị n'etiti silicone sample ebu na mmepụta ebu?
Na silicone ngwaahịa ụlọ ọrụ, mgbe e nwere ndị ahịa ọhụrụ na anyị ase-atụle imekọ ihe ọnụ, anyị ga-ajụ ndị ahịa ma nke a silica jel ngwaahịa nwere a ebu, ma ọ bụrụ na e nweghị ebu, anyị kwesịrị ihota na-emeghe ebu, izugbe oghere e kwuru na-ekewa n'imeghe sample ebu e kwuru na mmepụta ebu e kwuru, ya mere, gịnị mere anyị chọrọ abụọ iche iche nke ebu kwuru? Gịnị bụ ihe dị iche n'etiti sample ebu na mmepụta ebu maka silicone ngwaahịa? Chengda roba na plastik na-eme ka ị ghọta!
Iji ghọta ihe dị iche n'etiti ebu ebu na mmepụta ebu nke silicone ngwaahịa, anyị ga-akpa ịghọta ihe bụ sample ebu na ihe bụ mmepụta ebu. N'ebe a, m ga-akọwara gị na ihe nlele ahụ bụ n'ezie ịkpụzi silica gel ebu eji eme ihe maka ịnwale. O nwekwara ike ịrụ ọrụ mmepụta ihe, mana ihe bụ isi bụ igosi ndị ahịa ma ogo, usoro na ọdịdị nke ngwaahịa anyị ọ dị mma, a pụghị ịmịpụta ihe nlele a, yana enwere ike iji ya rụọ ọrụ maka ịkpụzi vulcanization na mmepụta nke ngwaahịa silica gel. Ebumnuche ya bụ itinye ya n'ime usoro mmepụta, karịa ịkwado ngwaahịa maka ndị ahịa. Nkume mmepụta mmepụta bụ ngwaahịa gbanwetụrụ site na imeziwanye usoro nha nke ngwaahịa silica jel na ndabere nke ihe atụ ahụ.
Ihe dị iche n’etiti ihe nlere na ịkpụpụta ihe bụ na ihe nrụpụta ahụ nwekwara ike mezue ọrụ ịkpụzi vulcanization, mana ihe nlele ahụ nwere ike mezue ihe karịrị 5 ọrụ nrụpụta ọrụ, ebe nrụpụta ọrụ nwere ike mezue ọtụtụ narị ọrụ ọrụ. Ke adianade do, na akụkụ nke ebu Ndinam, na mmepụta ebu tumadi na-atụle na mgbe e mesịrị mgbanwe, Na isi echiche nke mmepụta ebu bụ mmepụta, àgwà!
Post oge: Jun-15-2021